Hevitra MPANOHARIANA | Desambra 2008
Fa raha sanatria moa ny ratsy sy ny tsy izy no nofidian'ny Malagasy?
2008-12-05 @ 20:05 in Ankapobeny
Mivolon'andro fetin'ny faran'ny taona sahady ny tontolom-bolongana malagasy amin'izao fanombohan'ny volana farany amin'ny taona izao. Toa dradraina mandrakariva fa sahirana sy mijaly ity malagasy ity nefa raha ny tontolo no jerena tsy dia hita soritra loatra izany. Toa ny saina fotsiny no mibaiko hoe mijaly aho, sahirana aho, tsy rariny izao sy izao fa ny atao sy ny omanina kosa toa mifangarika amin'izany. Nefa etsy ankilan'izay koa ilay fisainan'ny besinimaro tsy nambara loatra fa na inona fahasahiranana na inona fijaliana, tsy maintsy omanina ny fety, tsy maintsy atao izay hahafinaritra ny tena. Matoa mahavita fety, matoa manao izay mahafa-po na dia mety ho ezaka be aza vao vita izany dia efa ao anatin'ny sokajin'ny manan-katao ianao izay. Fa moa tena mitombina ve izay fisainana izay?
Eo amin'ny andavanandron-dRamalagasy eto Antananarivo, feno mpivarotra ny amoron-dalana maro eto afovoan'ny tanàna. Soa ihany fa noho ny ezaka nataon'ny Kaominina dia efa mba tsy hita loatra aloha ny mpivarotra anaty lalana nanjaka tetsy Behoririka volana vitsivitsy lasa izay. Efa ezaka lehibe izay satria mba nisy ny fifehezana ny gaboraraka manjaka amin'ny olona. Ny olana aminy kosa dia kely loatra ny faritra natokana hoan'ny mpandeha an-tongotra nefa mbola lasan'ny mpivarotra ihany izany lalana efa kely izany. Vokany, ny fiara sy ny mpandeha an-tongotra no mandeha amin'ny arabe. Oadray, misy ezaka vitan'ny Kaominina ihany koa ka, efa voafehy tsy hivarotra amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra efa voafefy koa ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Tena henjana ny fifehezana ireto olona ireto, indrindra fa ny mba ahafahany manao izay tiany atao no tena nifidianany anao, ka nankahalany ilay resy nofidianay satria tsy nanana antra ny mpivarotra amoron-dalana mihitsy ny ekipa teo aloha. Fa raha sanatria moa...?
Fa mba manao ahoana tokoa moa ny entana amidin'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny amin'ny ankapobeny? Izany aho no tena manontany basy amin'ny anglisy! Fa iza indray no tsy mahalala fa entana vita shinoa no amidiny? Entana shinoa izay tsara endrika sy mora vidy ka manintona ery! ny endriny fotsiny anefa no tsara fa ny ankoatra izay mampanompa, ho ahy izay mitady ny hamafiny ohatra! Fa tsy mitovy hevitra amiko velively ny maro an'isa, ny azy ny mora vidy na dia mety ho simba rahariva ihany aza no tena ankafiziny... impiry lazaina fa tsy mety fay! hay tokoa moa vetivety ihany no ilany iny zavatra novidiany iny fa tsy natao hotehirizina iny. Fa raha sanatria moa...? Ka iny no mba takatry ny volany ka!
Endrika hita maso ihany ny fitobahan'ny entana shinoa fa tsy mampivandravandra kosa ny fahasimban'ny tsenan'ny asa tanana sy ny vokatra malagasy. Ny fampiakarana ny harin-karena shinoa na kelimaso no toa tena imasoan'ny mpanjifa na tsy tsapany aza izany, fa tsy tsapany akory fa mamotika tsikelikely hatrany ny fidiram-bolany anie izy raha mbola mividy ireny entana vahiny ireny. Amin'izao fotoana izao, tsy misy mampiavaka ny volon'andro fety intsony ny tsena isan'andro hita eny an-dalana, ankoatra ny fahazoan'ny mpivarotra alalana hanao gaboraraka hahazo hivarotra eny afovoan'ny arabe, ka hamono ny lalana mihitsy... indrindra moa fa iny manamoronany kianjan'ny Mahamasina iny, rehefa avy izay fotoana izay. Manonofy aho raha toa ka tsy hanaiky ny hisian'ny tsena faran'ny taona intsony ny Kaominina amin'ity indray mitoraka ity, fa nofy tsara izany amiko an!
Fa ny tena mahavariana dia ny hafetsen'ireto shinoa ireto amin'ny resaka varotra. Hitany fa ny lamba sy ny entana tonta avy any Eoropa no tena maharoboka ny mpanjifa dia fanahy iniany haka endrika ireny lamba tonta ireny, ary miaraka amin'ny fofona mahatonta mampiavaka azy izay ny entana atobany. Natao ihany ny tsy hiteny fa efa tsenan'ny shinoa tanteraka ny eto Antananarivo. Ary Jereo ireto trano vaovao sy goavana eto Behoririka sy ny manodidina ireto: Efa tena Shinatanàna mandroso sy maoderina mihitsy anie eto e! Ho gaga ianao izay tsy nandalo teto tao anatin'ny volana telo na efatra... fa efa mananika an'Ambodifilao indray ry zareo amin'izao fotoana izao. Ary mihavitsy ny trano ana-Malagasy amin'iny faritra iny an! Tsy ho zanataniny intsony isika avy eo fa tena taniny mihitsy ka ry zareo indray no hifandimby ho filohan'ity firenena ity, ry zareo no tena antsoina hoe malagasy. Ho teny ofisialy fahaefatra ny teny Shinoa. Aza hitako fa aleo sanatriavina...
Raha tsy mahazo ny resaka ataoko ianao, dia faly aho milaza aminao fa na izaho aza tsy mahazo ny resaka ataoko amin'izao fotoana izao. Fa efa manakaiky tokoa ny fetin'ny faran'ny taona e! Dia indro Ramalagasy fa hitady ny hazo tsy misy eto Madagasikara handravahana ny tranony. Dia ny hazo kesika mifanakaiky aminy no indramina horavahana. Efa impiry aho no niteny sy nanoratra fa ireny no mba zavamaniry velona amin'ny tany mangatsiaka ka mamelombelona ny endriky ny fety any aminy fa e-he! Tsy fety amin-dRamalagasy raha tsy misy ireny. Tsinontsinoavina ny toetr'andro sy ny voary natolotra azy. Voankazo anie izany omena antsika isaky ny faran'ny taona izany e! Maninona raha ireny no andravahana ny trano fa mba manana ny hanitra mampanentohento azy koa anie ireny e! Fa matoa mbola misisika hitady ny tsy misy eto Madagasikara isika, sady efa voarara rahateo ny manapatapaka hazo kesika amidy ho an'ny fety, dia mankalaza ny fety amin'ny mahafety Eoropeana azy sy fety Amerikana Tavaratra (mangatsiaka sy mamanala) azy no tena ankafizintsika fa tsy amin'ny mahafety kristiana azy velively.
Dia ahoana izany ireny hazo noely goavana atao ampiangonana ireny? Sao dia efa lasa sekta ary i jentilisa ity na sanatria nivadika ho tsy mpino? Izaho aloha dia tena mba gaga ny hampidirana ireny am-piangonana e! Inona no ifandraisan'iny hazo iny amin'ilay fety nahaterahan'ny Mpamonjy ho an'ny kristiana? Sa hazo fanomanana ny hanantonana azy sahady iny? hihomehy aho raha izay no valiny! Fa misy anganom-bazaha izay nolazaina tamiko fa isaky ny sasakalin'ny 24 desambra izay dia misy fety jentilisa fanaon'ny Eoropeana tsy nety resy lahatry ny filazantsara mandrak'ankehitriny ivavahan-dry zareo mba hampiverina ny masoandro mitady tsy hiverina hanazava ny tany intsony. Dia lazaina fa na mangatsiaka aza ny andro dia mananika iny tendrombohitra mideza iny ry zareo dia manao ny fivavahany. Misy ny milaza fa eo anoloan'ny sapins, izay sisa maniry sy maintso ry zareo no mivavaka sy midera. Tsy mahagaga raha misy ny hira malazan'ny Noely tsy ahitana akory ny anaran'ny Mpamonjy. Fa ny filazalazana hafa moa no niteny fa tany amin'ny taonjato faha XVII tany ho any tany Alsace vao nampidirina an-trano ny fandravahana ny hazo noely an-trano. Mbola baraingo amiko ihany na dia izany aza ny nampidirana io hazo io tao am-piangonana izay lazaina fa tranon'Andriamanitra.
Fa mbola misy zavatra mahavariana ahy ihany koa amin'io rohy ahitana ny tononkiran'ny Mon beau Sapin io. Toa miaraka tsy misy adihevitra ny hazo noely sy ingahy noely kely (petit papa noel sa dadabe noely e?) na i masindahy Claus. Natao hampanonofinofy ny ankizy moa ny fisian'izany ingahy noely kely izany fa rehefa lehibe dia atao tonga saina amin'ny tsy fisiany. Dia gaga amin'ny fianakaviana milaza ny tenany ho kristiana aho raha mampino an'ingahy noely kely ny zanany koa ry zareo? fa raha manao izany izy dia aza gaga intsony rehefa lehibe ny ankizy fa holazainy ho noforonina koa ny tantaran'izany Jesoa oadray Jesosy izany. Ka efa nandainganao izy tsinona koa! fa aza adinoina ilay hoe toa tsy misaraka eo imason'ny tandrefana (araka ny fijeriko ilay rohy) ingahy noely kely sy ny hazo noely izay tsy misy ifandraisany amin'ny nahaterahan'ny Mpamonjy an! Fa mirary mandrakariva ny hahatontosanareo ny fetyaraka izay mahadiavolana ny sainareo hatrany aho na dia izany aza.